N'Golo Kante Oo Chelsea Iskaga Tagaya, Sababta Qariibka Ah Ee Uu Lampard Uga Cadhooday & Kooxda Uu Doonayo - Gool24.Net
N’Golo Kante Oo Chelsea Iskaga Tagaya, Sababta Qariibka Ah Ee Uu Lampard Uga Cadhooday & Kooxda Uu Doonayo
Khadka dhexe ee kooxda Chelsea ee N’Golo Kante ayaa isha ku haya inuu gabi ahaanba iskaga tago kooxdaas xilli ay jiraan warar sheegaya inay isku dhaceen tababarahiisa Frank Lampard isaga oo waliba sii tilmaansaday kooxda uu doonayo.
Kante ayaa kamida xiddigaha khadka dhexe ee dunida kubadda cagta kuwooda ugu wanaagsan waxaana uu haatan kula maqan yahay kulamada caalamiga ah dalkiisa France kahor kulanka adag ee ay Croatia la yeelan doonaan.
Wargeyska ree France ee Le Parisien ayaa hadda shaaca ka qaaday sheeko lama filaan ah oo la xidhiidha inuu khilaaf soo kala dhex galay Kante iyo tababarihiisa Chelsea ee Frank Lampard taasina ay ku dhalisay inuu rabo bixitaan.
Le Parisien ayaa ku doodaya in Lampard uu diiday in Kante uu xalqad tababarka ah ka maqnaado si uu uga qayb galo aroos saaxiibkii ah taasina ay dhalisay inuu ka xanaaqo,
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegaysa in N’Golo uu ku riyoonayo inuu ku biiro kooxda Real Madrid oo ay wakiiladiisu doonayaan inay gudaha 12-ka bilood ee soo socda dhinac uga saaraan Stamford Bridge.
Kante oo 29 sano jir ah ayay saddex sano oo kale ka heshiiskiisa Chelsea laakiin inta badan sanadkan 2020 ayaa ahaa mid lala xidhiidhinayay inuu iskaga tagayo kooxda.
Kante iyo Lampard ayaa xilli ciyaareedka bilawday iyaga oo dareen fiicani ka dhaxeeyo oo aan isku dhacsanayn kaddib markii uu macalinka ree England u ogolaaday inuu tababarka ma maqnaado maadaama oo uu xanuun ka taxadarayay.
Kante ayaa qabay dhibaatooyinka ah inay ka muuqdeen calaamadaha caabuqa Korona isagoo shaki gelinayay in horyaalka dib loo bilaabayo bishii June.
Xiddigii hore ee Leicester City ayaa xilli ciyaareedka la dhammaystay Chelsea balse isku dhaca isaga iyo Lampard ee haatan ayaa ku dhalin kara inuu iskaga hayaamo kooxda.